Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana Eoropeana » Fironana mampidi-doza vaovao any Alemaina: Fanafihana antsy
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana Alemana • Vaovao • Safety • Fitaterana
Na dia loza mitatao ho an'ny fizahantany aza ny fitifirana vao haingana tany Etazonia na Meksika, dia tamin'ny alalan'ny fanafihana antsy tany Alemaina izany fandrahonana izany.
Mpandeha maromaro tao anaty fiarandalamby ICE Intercity mandeha eo anelanelan'i Regensburg sy Nuremberg any Alemaina no naratra tamin'ny fanafihana antsy androany, telo naratra.
Ny asabotsy maraina tamin’ny 9 ora maraina no nitrangan’ny fanafihana tamin’ity fiaran-dalamby haingam-pandeha avo lenta ity.
Teratany Syriana 27 taona no tezitra noho ny antony tsy fantatra. Nanafika mpandeha tao amin’ny efitranony izy.
Nijanona vonjy maika teo amin’ny fiantsonan’ny fiaran-dalamby manaraka ny fiaran-dalamby ary azon’ny polisy nisambotra ilay mpanafika ary ny mpamonjy voina voalohany nitondra mpandeha naratra tany amin’ny hopitaly teo akaiky teo.
Ny polisy federaly alemana tompon'andraikitra amin'ny fiarovana amin'ny fiaran-dalamby dia tsy afaka maneho hevitra amin'izao fotoana izao.
Misy fironana mitohy any Alemaina miaraka amin'ny fanafihana antsy, ny sasany mahafaty.
Ny fanafihana androany no antony nahatonga ny maro any Alemaina handefa hafatra feno fankahalana ho an'ireo mpitsoa-ponenana ao amin'ny firenena ao amin'ny Twitter, telegrama, ary media sosialy hafa, na vondrona chat.
Herinandro lasa izay dia nisy fanafihana tao amin'ny Tanàna Taloha tao Dusseldorf, ivon'ny fialam-boly sy ny alina no fanafihana faharoa tao anatin'ny 2 herinandro.
Tsy nisy ny aina nafoy, fa 2 17 taona no tsara vintana fa dokotera roa no nanatona afaka nisoroka ny fandehanan-dra mahafaty.
Taorian'ny androany zava-nitranga, Naverina nizotra ny fiaran-dalamby lavitra ka niteraka fahatarana hatramin’ny adiny 1.
Taitra ny minisitry ny atitany alemà Horst Seehofer ary nitantara ny faniriany ho an'ireo naratra sy ireo izay nanatri-maso ny fanafihana mba ho sitrana tsy ho ela.
Nisaotra ny sampan-draharahan'ny polisy izy tamin'ny hetsika haingana sy azo antoka mba hisorohana ny ratra na ny fahafatesana.